The kukonzera yechigarire zvikanganiso muna CNC lathe oparesheni
The chikuru chinokonzera yechigarire zvikanganiso muna CNC lathe oparesheni chikuru chinokonzera yechigarire zvikanganiso mukushanda CNC lathes ndechokuti kugadzira zvakarurama neimwe yechigarire chinoumba haasi mukuru, installation yakarurama hachisi yakakwirira, uye kusakara pamusoro yechigarire panguva kushandiswa iri pachena. Yechigarire erro ...Read more »
CNC lathe Nokuraramisa servo zvokudya hurongwa dambudziko
1.1 Overtravel Kana zvokudya inofamba akapfuudza Software muganhu wakasiyiwa Software kana Hardware muganhu pakutsvaga muganhu chinja, imwe overtravel aramu chichaitika, uye aramu kugutsikana achapiwa uratidzwe pamusoro CRT. Maererano CNC hurongwa manual, kuti mhosva inogona kubviswa. , Simudza ...Read more »
Common zvinokanganiswa CNC machine centre servo hurongwa Sezvatinoziva tese, ari machine centre servo kwava hurongwa rinopa simba kune muchina mudziyo. Pasina servo hurongwa machine centre, kuti workpiece haagoni kupatsanurwa. Naizvozvo, servo hurongwa zvikuru kukosha machine nduro ...Read more »
Ko machine resimbi zvikamu zviri CNC machine muzinda yakanaka kana zvakaoma?
Chokutanga, machine resimbi zvikamu CNC machine nzvimbo zvakanaka zvakaoma njanji kana chakanaka njanji. Iron zvikamu zvinoitika zvakajairika workpieces. Vatengi vakawanda muchakumbira kana machine centre harishandiswi ari machine centre kuti dzinoona simbi nhengo. Ko "CNC machine centre ...Read more »
Chii Vacuum Chuck pamusoro CNC machine centre?
1. Chii CNC Vacuum Collet? Vacuum kubvisa nemikombe, aizivikanwawo Vacuum spreaders, tiri mumwe Vacuum actuators. Kazhinji, kushandisa Vacuum chucks kubata nyaya ndiyo imwe yakachipa pashiri nzira. Vacuum chucks zvinowanikwa zvakasiyana siyana. Kubvisa nemikombe dzakagadzirwa rabha kunogona ...Read more »